isilumkiso: Ukusetyenziswa okungachazwanga rhoqo AFF_LINK - kucingelwa 'AFF_LINK' (oku kuya kuphosa impazamo kuguqulelo lwexesha elizayo lwe PHP) /media/soydemac.com/website/wp-content/plugins/abn-appstore/definitions.php kumgca 22
I-Apple isungule ibhetshi elungileyo yee-AirPod eFrance | Ndisuka mac
Kubonakala ngathi iApple inokunyusa ukuveliswa kwee-AirPod ngamanye amaxesha nangona uninzi lweewebhusayithi zinomhla wokugqibela weeveki ezi-6 zokuhanjiswa. Kule meko, esikufumanayo kwiwebhu ukufumanisa ukuba ngaba kukho isitokhwe see-AirPod kukuba abo baseCupertino baqalise ibhetshi elungileyo yee-AirPod kwilizwe lethu elingummelwane, eFrance. Iyinto engaqhelekanga kwaye siqinisekile ukuba le stock ayizukuhlala xesha lide kodwa ngalo mzuzu ii-AirPod bezikhona kwiivenkile ezininzi abanazo eFrance.
Nantsi ifayile umfanekiso weskrini kwiwebhusayithi yeStocknow Ukusuka kwimizuzu embalwa edlulileyo apho ungabona khona isitokhwe sokwenyani seemveliso zeApple kunye neeAirPod, zezona zikhangelwe mva nje.
Ngale ntsasa ezinye zezi AirPods ziye zafika eSpain kwaye abasebenzisi abaninzi bakwazile ukufumana ezabo. Okwangoku isitokhwe kwilizwe lethu singu-zero kwaye imveliso engaphezulu ayilindelwanga ukuba ifike kude kube ngomso. Ke ukuba uhlala kufutshane neFrance, elizweni okanye ungathumela umhlobo ayokuthenga enye yezi AirPod kwaye unomdla kuzo, ungathandabuzi kwaye uhambe ngokukhawuleza kuba kuqinisekile ukuba isitokhwe sezi siza kusebenza kwimizuzu njengoko kusenzeka kwezinye iindawo. Inyaniso amanqaku abomvu (aphelelwe sistokhwe) anyukile ukusukela ngala mhla besenza ukubanjwa ukuza kuthi ga ngoku sipapashe nje inqaku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » I-Apple isungule ibhetshi elungileyo yee-AirPod eFrance